စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ - Bezzia | Bezzia (စာမျက်နှာ 4)
ညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်တစ်နှစ်စတင်ရန်သော့ ၅ ခု
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပညာဆောင်းပါး၌လက်ျာခြေဖြင့်နှစ်ကိုစတင်ရန်သော့ ၅ ချက်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ စကားမစပ်, ငါတို့၏စာဖတ်သူများအားလုံးကိုနှစ်သစ်မင်္ဂလာ!
ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာဤဆောင်းပါးတွင်အလုပ်စိတ်ဖိစီးမှုအထူးသဖြင့်အချက် ၆ ချက်အားသင့်အားအကြံပြုတင်ပြထားသည်။
၉၀/၁၀ နိယာမသည်စိတ်ပညာ၌ဘာလဲဆိုတာသင်သိပါသလား။ သင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသင် ရွေးချယ်၍ မရပါ။ သို့သော်သင်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အားလုံးစိတ်ကျရောဂါအကြောင်း: အကြောင်းရင်းများ, အကျိုးဆက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ
ဒီနေ့စိတ်ပညာဆောင်းပါးမှာစိတ်ကျရောဂါအကြောင်းပြောတာပါ။ အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များနဲ့အချက်အလက်များ။ ၎င်းသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမကျသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစကလေးဆေးပြား - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
ဆေးလုံးအပြီးမနက်ခင်းတိုင်းကိုပြောပြပါမယ်။ ဘယ်တော့ယူမလဲ မင်းမှာဆန့်ကျင်မှုတွေရှိလား။ ၎င်းသည်သန္ဓေတားနည်းအဖြစ်လုံခြုံပါသလား။ ရှာတွေ့သည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုအတွက် Carl Jung သည်စာပိုဒ်တိုများ
ဒီနေ့စိတ်ပညာဆောင်းပါးမှာမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုအတွက် Carl Jung ရဲ့ကိုးကားချက်တချို့ကိုမင်းတို့ယူလာပေးတယ်။ သူတို့ကိုဖတ်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
ဒီနေ့စိတ်ပညာဆောင်းပါးမှာတစ်ယောက်တည်းနေခြင်းဟာမကောင်းဘူး၊ ဘယ်လိုမှဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
Rafael Santandreu မှခါးသီးမှုတိုက်ဖျက်ရေး decalogue
ဒီနေ့မှာတော့ Rafael Santandreu ကခါးသီးမှုကိုဆန့်ကျင်သော decalogue ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်နေသောအသေးအဖွဲကိစ္စများကြောင့်သင့်အား“ ထိတ်လန့်ခြင်း” မဖြစ်စေရန်အချက် ၁၀ ချက်။
Cybophobia ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အစာစားခြင်းကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးဆက်များကိုမဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။
သင်၏ကလေးတွေနှင့်နှောင်ကြိုးခိုင်မြဲစေရန်အကြံပြုချက် ၅ ချက်
သင်နှင့်သင့်ကလေးများအကြားရှိနှောင်ကြိုးကိုခိုင်မာစေရန်အထောက်အကူပြုမည့်ဤအချက် ၅ ချက်ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြေရှင်းနည်း။ စုံတွဲအတွက်ပြန်လာရန်ဆွဲဆောင်မှုများအတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ။ ကျွန်တော့်မိန်းမကငါ့ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အော်ဂဇင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်ခံစားရပါသလား။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီးတဲ့အခါမင်းငိုချင်သလား။ ဒီခံစားချက်ကြောင့်အဘယျသို့ထွက်ရှာပါ
Agoraphobia သည်လူ့ဘောင်အတွင်းရှိအသုံးအများဆုံး phobias များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချစ်ရသူတစ် ဦး ဆုံးပါးသွားခြင်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်နည်း
ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောပြမယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အဆင့်တွေအားလုံးနဲ့အဲဒါကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲ။
သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖြေရှင်းရမည့်ဒဏ္myာရီများစွာရှိသည်။ သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယင်း၏အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏သံသယများကိုရှင်းလင်းပါ
schizophrenia နှင့် psychosis အကြားခြားနားချက်များ
နီးကပ်အာရုံစိုက်ပါနှင့် schizophrenia နှင့် psychosis အကြားတည်ရှိရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုမှအသေးစိတ်မဆုံးရှုံးပါနဲ့။
ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်နည်း
သင်၏လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုစွန့်ခွာသွားမည့်လက္ခဏာ ၅ ခုရှိသည်
အသုံးအများဆုံးအိပ်မက်ဆိုးများနှင့်သူတို့၏အဓိပ္ပာယ် - သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကမင်းနဲ့ရင်းနှီးနေသလား။
သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုသင်မသိဘဲပင်ပျက်ပြားသွားစေနိုင်သည့်အရာအချို့ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုမဖြစ်စေချင်ပါကချက်ချင်းရှာဖွေပါ။
စိုးရိမ်စိတ် - အဲဒါဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲ
စိတ်ပညာဆိုင်ရာဤဆောင်းပါးတွင်ယနေ့လူအများကြားတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှု - စိုးရိမ်ပူပန်မှု - အကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
သင်၏ခေါ်ဆိုမှုကိုသင်တွေ့ရှိသောနိမိတ်လက္ခဏာများ - နောက်ဆုံးတွင်!
သင်အလုပ်တစ်ခုနှင့်အင်တာဗျူးလုပ်ပါသလား။ လုံခြုံမှုရှိရန်လိုပါသလား။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်သင်ယူနိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောအကြံဥာဏ်များသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလျှော့ချစေတဲ့နေ့စဉ်အကျင့် ၅ မျိုး
ဤရွေ့ကားသင်၏စိတ်ဓါတ်များကိုလျှော့ချသော5နေ့စဉ်အလေ့အထများဖြစ်ကြသည်။ မင်းတို့မှာသူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ် ... မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။
ဒီနေ့စိတ်ပညာဆောင်းပါးမှာသင့်ကိုအကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါတယ် - ကောင်းသောနေ့ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝိုင်းရံပါ။
ငါ့သားကဘာလဲ Ability ရှိပြီ။ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
စိတ်ပညာဆိုင်ရာဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာရင်ခုန်သံပျက်ပြားပြီးတဲ့နောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအဆင့် ၄ ဆင့်ကဘာလဲဆိုတာကိုသင့်အားပြောပြပါမယ်။ သတိရ: ဘယ်သူမှချစ်ခြင်းမေတ္တာအဘို့အသေခံရ၏။
မကုသရသေးသောနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသည်ပြproblemနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်၊ ယင်းကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရန်၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်စမတ်နည်းလမ်းများကိုသိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Dalai Lama အဆိုအရစွမ်းအင်သူခိုး
သင်သည်သင်၏စံပြဘဝကိုမြင်ယောင်။ လည်းအောင်မြင်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? ဤဆောင်းပါး၌သင့်အား၎င်းကိုရရှိရန်သော့ကိုပေးသည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?
အဆိပ်အတောက်ရှိလူများ? ကျေးဇူးပြု၍ မပေးပါ
သင်၏ပထမဆုံးအလုပ်နေ့သည်နီးကပ်လာပြီလော။ အာရုံကြော, ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်မသေချာမရေရာတွေအများကြီး! ဒီနေ့မြင့်သောမှတ်စုတွင်သင်သုံးလိုပါကဤအကြံပြုချက်များသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေသည်။
Self- လေးစားမှုတိုးတက်စေရန်စာအုပ်3ခု
ဤစိတ်ပညာဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်လိပ်စာနယ်ပယ်သို့စူးစမ်းလေ့လာသည် (သို့) မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအနည်းဆုံးကြိုးစားသည်။
ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများ - သူတို့နှင့်ညှိနှိုင်းရန်မဟာဗျူဟာများ
သင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးနဲ့ပconflictိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေပြီလား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏အရေးပါမှုကိုသိရှိပြီး ... ပြုလုပ်ပါ။
အဝေးသင်ဆက်ဆံရေး? ဟုတ်ပါတယ်ခက်ခဲပေမယ့် အကယ်၍ သင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသင်သိရင်ပြifနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပိုလွယ်ကူလိမ့်မယ်။
လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုလေ့လာပြီးသင်၏ဖန်တီးမှုနှင့်အသည်းအသန်ဘက်မှသင့်ကိုသယ်ဆောင်သွားစေပါ။ မင်း ... ဝံ့
အကယ်၍ သင်သည်ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်ခင်မင်မှုဖြစ်စေ၊ စုံတွဲဖြစ်စေဖြစ်စေဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ လှုံ့ဆော်မှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
မင်းကလူတစ်ယောက်ကမင်းကိုချစ်တယ်လို့ထင်နေရင်သူကအရမ်းပုန်းနေလိမ့်မယ် ... သူကသင့်ကိုသူကြိုက်မရဒီနိမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။
သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သော“ မိသားစု” ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရတနာဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများသည်ထိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာရတနာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သောထိုမိသားစုသည် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဘ ၀ ကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
မင်းကိုချစ်ရင်ဂရုစိုက်ပါ၊ သင်မချစ်ရင်ဂရုစိုက်ပါ။ ဖောက်ပြန်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရနိုင်သောအများဆုံးနာကျင်စေသောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခိုင်မာသောလျှင်သင်၏အရွယ်အစားမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ၀ မ်းနည်းခြင်းထက် ၀ မ်းနည်းခြင်းကသင့်နှလုံးအတွက်တိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ။
သိမ်မွေ့သောအလွဲသုံးစားမှု - မမြင်နိုင်သောအနာများ
သိမ်မွေ့သောအလွဲသုံးစားမှု - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ များသောကြောင့်မမြင်နိုင်သောအနာများကိုဖြစ်စေသည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုလေ့လာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်လူတစ်ယောက်နှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိပါကသူသို့မဟုတ်သူမအနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်မည်လော။ ဆိုင်းဘုတ်အချို့လက်လွတ်မနေပါနှင့်
caressing ၏အနုပညာ: စုံတွဲထဲမှာပါဝါ၏ဘာသာစကား
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အဘယ်သူ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသူမသိတယ်နှင့်သူ၏ဧကန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်အကြံပြုကြသည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ် caressing ၏ဧကန်အမှန်အတော်ပင်။
မိမိအဟောင်းများကိုစဉ်းစားသူတစ် ဦး လူကိုစွန့်ခွာဖို့ဘယ်လို
အကယ်၍ သင်သည်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးသူကိုစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သောလူတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နေသည်ဆိုလျှင်သင်သူ့ကိုစွန့်ခွာရန်စဉ်းစားနေဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်သင်မည်သို့လုံခြုံမှုရှိစေသနည်း။
စစ်မှန်သောအချစ်သည်အနုပညာ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှု၊ နေ့စဉ်အလုပ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုသိခြင်း၏သိမ်မွေ့သောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။
မိခင်များနေ့ - ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုထောက်ပံ့သောအမျိုးသမီးများအတွက်
ဒီနေ့ Bezzia မှာကျွန်တော်တို့ကိုအမေများနေ့ကိုကျင်းပကြတယ်၊ ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘဝပေးခဲ့တဲ့သတ္တိရှိသူအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုကြတယ်။
Book Day - ငါတို့ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတဲ့ဖတ်ခြင်း၊ ငါတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့ဖတ်ခြင်း
ဒီနေ့၊ Aprilပြီ ၂၃ ရက်၊ ကမ္ဘာ့စာအုပ်နေ့ကျင်းပ Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အတွက်အမှတ်အသားဖြစ်သောအရာအားလုံးကိုသင့်အားမျှဝေပေးလိုသည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးသည်လူတို့၏ဘ ၀ တွင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းတွင်ကြီးထွားရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ပွေ့ဖက်ခြင်းတွင်ကုထုံးနှင့်ကုသနိုင်သောစွမ်းအားရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ယနေ့သင်မည်မျှပွေ့ဖက်လိုက်ပြီနည်း။ သူတို့ဘယ်တော့မှမလုံလောက်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝတ်လစ်စလစ်": ရငျးနှီးအရေပြားကိုကျော်လွန်သွားသောအခါ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝတ်လစ်စလစ်သည်လူနှစ် ဦး ၏လိုအပ်ချက်၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ဆန္ဒများကိုပေါင်းစည်းရန်အရေပြားကိုကျော်။ သွားသည်။ ၎င်းကိုသင်ထင်ဟပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ထိရောက်သောဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူစိတ်ပညာရှင် Walter Riso ၏အဆိုအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ အတွင်း…
အဖေများနေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အံ့ဖွယ်ရာများအတွက်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာ (၆) ခု
အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုအားကောင်းလာလိုပါကသင်ဟာသင်ထင်သည်၊ အချို့သောအကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာသင့်သည်။
အမျိုးသမီးများနေ့ - ငါတို့အားလုံးရဲရင့်သောအမျိုးသမီးများအတွက်
ယနေ့မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသမီးများနေ့ကိုကျင်းပသည်။ ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အထူးအခိုက်အတန့်။
သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌စိတ်ပျက်သောအခါသင်၏ ဦး နှောက်သည်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်သည်
အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်၊ စိန့်လူးဝစ္စတက္ကသိုလ် (ယူအက်စ်) မှာပြုလုပ်တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက် ...
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်တကယ့်ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Philophobia ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းကိုသင်ထင်ဟပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေသည့်တိုက်ဆိုင်မှုများရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းကံကြမ္မာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစဉ်းစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
၀ မ်းနည်းမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးလာသောအခါထိုသိသောရန်သူ - မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်လျှင်မြန်စွာတိုးပွားစေရန်နည်းလမ်း (၆) ခု
ထိုစုံတွဲနှင့်ရင်းနှီးသောရင်းနှီးမှုသည်ချစ်ခင်တွယ်တာမှု၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏သဟဇာတဖြစ်မှုကိုနေ့တိုင်းတည်ဆောက်ရမည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုအားပေးသလဲဆိုတာရှာဖွေပါ။
အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်ကိုမချစ်ပါကတောင်းပန်ပါ၊ မတောင်းပါနှင့်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းစောင့်ပါ။ အချစ်မရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလက်ခံရန်သင်မည်သည့်နည်းများဖြင့်လိုက်နာရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါသည်။
သင်သိသင့်သောစုံတွဲအတွက် estrangement5လက္ခဏာ
သင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်အလှမ်းဝေးသော (၅) မျိုးကိုသင်ရှင်းပြပြီးသင်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည် (သို့) အခြားဆုံးဖြတ်ချက်များချရမည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးခံစားမှုအချို့ကိုသင်သိလိုပါသလော။ ၎င်းတို့သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖြစ်၍ အလွန်သဘာဝကျသောကြောင့်သင်သည် ယနေ့မှစ၍ ၎င်းတို့ကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အခွင့်အရေးများရှိသောသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံလိုပါက၊ ဤဆက်ဆံရေးမျိုးမစတင်မီအရေးကြီးသောအရာများထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်သောလူတစ် ဦး သည် PAS ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဖြင့်မြင်တွေ့ခံစားစေသည်။ ရှာတွေ့သည်။
မင်းကအမြဲတမ်းတိုင်တန်းနေတဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်လား။ သင်အမှန်တကယ်ပိုဆိုးစေသည့်အတွက်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုပါသလား။ ဆက်ဖတ်ပါ
စုံတွဲထဲမှာ eroticism နိုးထရန်သော့ချက် 5
ငါတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆောင်သွားမှုနည်းနည်းလျော့နည်းလာသည့်အချိန်ရောက်လာသည်။ သူမပြန်နှိုးရန်သော့ ၅ ချက်ကိုရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရေးမစိုက်သူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမမြင်သူတစ် ဦး နောက်သို့လိုက်ခြင်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ သင့်ကိုတွေ့ပါစေ၊ ငါတို့ဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောတယ်။
သငျသညျအဆိပ်ဆက်ဆံရေး၌နထေိုငျခြင်းနှင့်မသိလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ Bezzia မှသင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုချက် ၆ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
codependency မှပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အကြံပေးချက်များ ၂
မှီခိုမှုဆိုတာဘာလဲ? သင်ဟာမှီခိုနေရသူတစ် ဦး လား။ ကောင်းပြီ၊ မပူပါနဲ့၊ ဒီအကြံပေးချက်နှစ်ခုကသင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်လို့ပါ။
ဘဝကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆွဲဆောင်ရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပွဲမတွေ့သေးဘူးလား။ စိတ်မပူပါနဲ့သင့်ဘဝကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆွဲဆောင်ရန်သော့ ၅ ချက်ပေးပါ။
အချစ်နှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်း ... သူတို့အမြဲတမ်းအတူတကွလက်တွဲသလား။
လူအချို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုသည်အမြဲတမ်းဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ဒီအတွေးတွေကြောင့်ဘယ်တော့မှသွေဖည်မသွားပါစေနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမင်းပြပေးပါ
စွန့်ပစ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားခြင်းလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုမသိကြပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြတယ်။
အခြားသူတစ် ဦး ပေါ်လာပြီးလက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိလျှင်လုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကားအဘယ်နည်း။ ဒီနေ့ Bezzia မှာငါတို့ကိုသော့တွေအားလုံးပေးချင်တယ်။
မိတ်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်အတူတူကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည့်မည်သည့်လက္ခဏာများ၊ မိတ်ဖွဲ့မှုကောင်းများရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲမှုကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်သောသူ - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတွင်ရှာဖွေပါ။ ရလဒ်ကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသမိုင်းရှိသည်၊ ထိုအတိတ်ချစ်ခြင်းများကကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအမှတ်အသားပြုသည်။ သင်၏လက်ရှိဆုံးဖြတ်ရန်မလေ့လာပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်ခဲဆုံးအရာမှာအမုန်းတရားမဟုတ်ဘဲလျစ်လျူရှုမှုမဟုတ်ပါ
ဆက်လုပ်ပါ (သို့) အရာအားလုံးနှင့်အတူချိုးပါ။
ဆက်လုပ်ပါသို့မဟုတ်အရာအားလုံးနှင့်အတူချိုးဖျက် ... သင်သည်ဤခက်ခဲသောအခြေအနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ဖူးပါသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်သင်ဘာတွေအကဲဖြတ်သင့်သလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါတယ်။
နှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုသည်မှာမလွယ်ကူပါ။ ဆင်းရဲခက်ခဲမှုနှင့်မသေချာမရေရာမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ဝိုင်းကိုပိတ်ပြီးရှေ့သို့ရွေ့ရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။
ဝံ့ ... သင်၏နှစ်သိမ့်မှုဇုန်မှထွက်ပါ။
အိပ်မက်မက်လား မင်းမှာစီမံကိန်းရှိလား။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ အခွင့်အလမ်းကိုတွန့်ဆုတ်သို့မဟုတ်လက်လွတ်မခံပါနှင့်သင်၏နှစ်သိမ့်ဇုန်မှထွက်!
Self- ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, တစ်သက်တာကြာရှည်သင့်တယ်တဲ့ဆက်ဆံရေး
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီတွင်ဝိညာဉ်ရေးအိမ်ထောင်ဖက်ရှိသည်ဟူသောအတွေးကို“ ရောင်း” လေ့ရှိသည်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တရားကားအဘယ်နည်း။
ပြီးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးသည်လွတ်လပ်မှုနှင့်တွဲဖက်မှုမရှိဘဲတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုတို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
သူတို့သည်သင့်ကိုသစ္စာဖောက်ကြပြီလော။ သင်ငြင်းပယ်ခံရပါသလား ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာငြင်းပယ်မှုကိုကျော်လွှားရန်သင့်အားနည်းဗျူဟာ ၃ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သူတို့ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးထပ်မံပျော်ရွှင်ရန်သင်ယူပါ။
အချစ်စစ်သည်မှော်အရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံး၏နေ့စဉ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အရေးပါမှုကိုဘယ်တော့မှမမေ့ရ။
စိတ်ခံစားမှုအထီးကျန်ခြင်းသည်တစ် ဦး တစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့အနားတွင်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ပျက်ပြယ်မှုများနှင့်မလိုအပ်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုသာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။
Philosophobia သည်ယနေ့လူများစွာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သူတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမခံစားလိုခြင်း၊ ခံစားမှုအသစ်ခံစားရခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
"မင်းမဟုတ်ဘူး၊ ငါပဲ" ဆင်ခြေနောက်ကွယ်ကဘာလဲ
“ ဒါငါမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုလား? ငါတို့ကိုအပြစ်တင်မယ့်နည်းလား၊ ဒါမှမဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီးပြီ” လို့ပြောဖို့လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းလား။
သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောခံစားချက်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ယခု မှစ၍ သင်လိုချင်တာကိုသေချာစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ဇနီးမောင်နှံအနေနှင့်တည်ငြိမ်။ ပျော်ရွှင်သောဘဝကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများ၏အမှားများသာမကကိုယ့်အမှားများကိုသိမြင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုအနာများကိုကုစားရန်မဟာဗျူဟာ ၅ ချက်
သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူပြိုကွဲခဲ့သလား သင်စိတ်ပျက်မိပါသလား။ သင်၏စိတ်ခံစားချက်များကိုသင်ပိတ်နိုင်စေရန်ရိုးရှင်းသောနည်းဗျူဟာ ၅ ချက်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
စုံတွဲထဲမှာ "သတိချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ၏အရေးပါမှု
သတိထားချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အခြားတစ် ဦး အားအပြည့်အဝနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောအရာဖြစ်သည်။ သူကသူ့နောက်တစ်ဝက်ကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘဲပျော်ရွှင်ဖို့ဘယ်သူ့ကို“ လုံးလုံးလျားလျား” တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှရှာနေတာမဟုတ်ပါဘူး
Wendy ၏ရှုပ်ထွေးသောနှင့် Peter Pan syndrome ရောဂါ၊ သင်ဆက်စပ်နိုင်သလား။
Wendy ၏ရှုပ်ထွေးသောနှင့် Peter Pan syndrome ရောဂါတို့သည်ယနေ့စုံတွဲများစွာအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ မင်းဘယ်သူလဲ
သင်သိသင့်သော "အချစ်ဇာတ်လမ်း" နှင့်ပတ်သက်သောမှားယွင်းသောဒဏ္sာရီများ
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းနှင့်အသစ်ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်စတင်ရန်မည်သည့်အန္တရာယ်များရှိနိုင်သနည်း။ မည်သည့်အတိုင်းအတာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကရှင်းပြသည်။
မခံစားရန်အလို့ငှာမခံစားရရန် - ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြန်ကျသွားမည်ကိုကြောက်ရွံ့သည့်အချိန်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများကိုပိတ်ထားပြီးမခံစားရရန်မခံစားရရန် ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။ မင်းကိစ္စလား
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုံးနိမ့်မှုများ၊ အဲဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့သင့်ကိုသင်ပေးပါတယ်။
အနမ်းတွေဟာငါတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လုံခြုံမှု၊ ဒီရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ရပ်နောက်ကွယ်မှာဖုံးကွယ်ထားတာတွေအားလုံးကိုရှာဖွေပါ
နှစ်များရှိသော်ငြားကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အလိုဆန္ဒကိုရှင်သန်စေနိုင်ပါသလား။ ဒါပေါ့။ ဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
သင်စဉ်းစားဖူးပါလိမ့်မည်၊ လက်တွဲဖော်မရှိဘဲသင်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသလော။ နောက်ဆောင်းပါးမှာသင့်ကိုအဖြေပေးပါတယ်။
ပြီးတော့မင်း၊ သင့်ကြင်ဖော်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ချစ်သလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိရောက်သောဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့်ပူးတွဲမှုသုံးမျိုးကိုရှာဖွေပါ။
အဆိပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး: စုံတွဲအတွက်ရန်လို - passive ပရိုဖိုင်းကို
ဆက်ဆံရေးတွင် "ဆွဲဆောင်မှုဥပဒေ" ရှိပါသလား?
ဆွဲဆောင်မှု၏နိယာမတရားကထိုအခွင့်အလမ်းနှင့်အချို့သောစွမ်းအင်များကကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ဆုံမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြသည်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တရားကားအဘယ်နည်း။
ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတခြားသူတွေကိုဘာကြောင့်မရွေးတာလဲ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကနှင့်အတူအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာနဲ့အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာရှာပါ။
Emotional Blackmail ၏အန္တရာယ်ရှိသောအနုပညာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း
စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအရှုံးပေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ရှိသည် - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၀ န်ချစေသည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ။
မိတ်ဖက်မပါဘဲခရစ္စမတ်? ဒါဟာအရေးမကြီးဘူး၊ နှစ်သက်တယ်။
မိတ်ဖက်မပါဘဲခရစ္စမတ်? ၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ မွေ့လျော်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ပျော်ရွှင်ရန်အတွက်အဖော်ရှိရန်မလိုအပ်ကြောင်းအမြဲသတိရပါ။ ဒီစိတ်ကူးများကိုသတိပြုပါ
ဇနီးမောင်နှံအနေနှင့်ငြင်းခုံခြင်းအနုပညာသည်အမြဲတမ်း Emotional Intelligence ကို အသုံးပြု၍ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းနှင့်ဒေါသကိုပယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့အားလုံးကိုသော့ပေးပါ
မိသားစုနှင့်လူမှုရေးတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ ညစာစားပွဲများ၊ စျေး ၀ ယ်ခြင်းများ ...။
သင်ဘယ်လိုများသောအားဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျလေ့ရှိသနည်း သငျသညျတစျခုအကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုကွင်းဆက်သလား သို့မဟုတ်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးသောထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ရှာဖွေနေသူဖြစ်နိုင်သလား။ ရှာတွေ့သည်။
ကံကြမ္မာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ဖြစ်မည့်သူကိုအမှတ်အသားပြုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်နွယ်သောဒဏ္myာရီအကြောင်း၊ သင်၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဘဝကိုထိန်းချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
စုံတွဲသည်ပျော်ရွှင်မှုသည်မျှော်မှန်းချက်မဟုတ်ပါ၊ ရိုးရှင်းသောရိုးရာဓလေ့ဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမွေးမြူနိုင်သည်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်သည်။ မင်းကိုသင်ပေးတယ်
"Shades of Grey 50" မှလိင်အကြောင်းလေ့လာခြင်း
"Shades of Grey 50" တွင်ပါရှိသည့်ခေါ်ဆောင်သွားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်မက်လုံးအသစ်များထည့်ရန်ကောင်းသောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြယ်လှယ်ခြင်းခံရသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ဆွေးနွေးချက်စုံတွဲ - သူတို့ကိုဘယ်လိုစီမံရမလဲ။
အငြင်းပွားမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ပိုမိုလေးနက်သောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်သူတို့ကိုမည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း။ သင့်ကိုသော့ပေးပါ။
လူနှစ် ဦး ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ချစ်ခင်နိုင်ပါသလော။
လူနှစ် ဦး နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ များသောအရာဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်ကိုဆိုလိုသောအဖြစ်မှန်။ မင်းကိုရှင်းပြတယ်
အမျိုးသမီးများစွာသည်“ ခက်ခဲသောယောက်ျားများ” ၏သြဇာရှိသည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသို့ဆွဲဆောင်ခံရသည်၊ သို့သော်ထိုဆက်ဆံရေးများကကျွန်ုပ်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သလော။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့အားဖြည့ ်၍ အားဖြည့်ရမည်နည်း
တခါတရံမှာအနာဂတ်မရှိသောဆက်ဆံရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသိရမည်၊ မင်းကိုရှင်းပြတယ်
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအရာများကိုစွန့်လွှတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်သတိထားပါ၊ သင်ဘယ်တော့မှမလျစ်လျူရှုသင့်သောအရာများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာများရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ထိရောက်တဲ့ပုံစံတွေ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော
စုံတွဲ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းနေရာသည်ကျန်းမာကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
မှားယွင်းပြီးနောက်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဘယ်အချိန်မှာဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်ပိုမိုသင့်လျော်သနည်း ကျနော်တို့ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ရှင်းပြပါ။
အဆိုပါစုံတွဲဆက်ဆံရေးဟာဆက်သွယ်ရေး, ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကတိကဝတ်အပေါ်အခြေခံသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးခံရကြောင်းအဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာများကပြသနိုင်သနည်း။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုသည်သစ္စာဖောက်ခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာအကြောင်းလဲသိလား မင်းကိုရှင်းပြတယ်
တစ်ခါတစ်ရံ၊ များစွာသောဆက်ဆံရေးသည်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မှီခိုရပြီးအချစ်သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာသည်။ သင်သော့များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသလား?
ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်မကိုနားမလည်ဘူး - စာနာမှုကင်းမဲ့တယ်
စာနာခြင်းသည်ပျော်ရွှင်သောစုံတွဲများ၏တိုင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူအားလုံးသည်ဤစွမ်းရည်ကိုလုံလောက်စွာမဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါ။ ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်သလဲ
တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အမြဲမလွယ်ကူပါ။ ရေရှည်တည်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်အုတ်မြစ်ချရန်သင်နှစ်ယောက်စလုံး၏ကတိက ၀ တ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်မကြာသေးမီအချိန်များ၌အဖြစ်များခဲ့သည် သို့သော်ယင်းသည်အမှန်ပင်တိကျသလော။ အဘယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သင့်သနည်း။
ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါစိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုရှင်းပြရတယ်။